Jubaland Archives - Page 2 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 22, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen gudaha Soomaaliya, sida ay bayaan ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Africa (AFRICOM) maanta oo Arbaco ah. Duqeynta ayaa ka […]
July 23, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaalyaano katirsan ururka Al-Shabaab ayaa weeraray saldhig ciidan oo kuyaala koonfurta Soomaaliya, waxayna dileen 27 dagaalyahan, sida ay sheegeen Al-Shabaab maanta oo Isniin ah. Weerarka ayaa daba socda weerarkii bishii June ee saldhiga […]
June 22, 2018 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Jimce ah dil toogasho ah ku fulisay saddex askari, sida uu sheegay sargaal katirsan maxkamada. Askarta la toogtay ayaa lagu eedeeyay in ay geysteen fal […]
February 22, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Saddex maleeshiyo ah oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha milatariga Mareykanka. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay in duqeynta ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka dhacday Isniintii meel u […]
August 2, 2017 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay qarax gaari oo ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo fiidkii xalay oo Talaado ahayd, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan ammaanka iyo caafimaadka. Qaraxa aayaa dhacay markii gaari […]
August 1, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa maanta oo Talaado ah u dabaaldegaysa maalinta sanadguuradeeda 19-aad. Gobolka oo dhan, xafiisyada dowladda iyo meelaha wax lagu barto ayaa xiran munaasabada sanadguurada darteed. Ma jirto dhoolatus milatari oo dhacaya, balse […]
July 5, 2017 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dagaal ku dileen 13 dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha Jubbaland. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig […]
June 17, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kadib muddo todobaad ah oo ay joogeen deegaanka Af urur masuuliyiin katirsan dowladda Puntland ayaa soo gabagabeeyay socdaalkoodii, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan dowladda. Masuuliyiinta ayaa horaantii asbuucii lasoo dhaafay deegaanka Af urur […]
June 11, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamo ajnabi ah ayaa maanta oo Axad ah burburiyay saldhig tababar oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe, sida uu bayaan ku sheegay […]
June 6, 2017 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta oo Talaado ah tagay magaalo xeebeedka Kismaayo. Madaxweynaha iyo wefdigiisa ayaa waxaa si diiran garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ugu soo dhaweeyay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. […]
At least 17 people have been killed in fighting between militants from Somalia’s al Shabaab group and clan militias in the country’s central semi-autonomous region of Galmudug, residents and the group told Reuters on Thursday. [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah iyo dhanka caafimaadka. Gaari laga soo [...]